Akwụsịla Inwe Olileanya! Ọ Dị Mkpa Ka Ị Nọsie Ike n’Ofufe Jehova! | Mụọ ya
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Ị̀ bụ Onyeàmà Jehova kemgbe ọtụtụ afọ, ma ya ana-agụsi gị ike ka di gị ma ọ bụ nwunye gị soro gị na-efe Jehova?
Obi ọ̀ dara gị mbà mgbe onye ị na-amụrụ Baịbụl na-ekweghị abata n’ọgbakọ, n’agbanyeghị na o yiri ka o nwere ezigbo mmasị ná mmalite?
Ihe ụfọdụ ụmụnna nọ na Briten kọrọ ga-enyere gị aka ịghọta na i kwesịghị ịkwụsị inwe olileanya. Ị ga-amatakwa ihe i nwere ike ime ka i “zipụ achịcha gị n’elu mmiri,” ka i nwee ike inyere ndị na-anatabeghị eziokwu aka.—Ekli. 11:1.
Ọ DỊ MKPA KA Ị NỌSIE IKE N’OFUFE JEHOVA
Otu ihe dị mkpa i kwesịrị ime bụ ịnọsi ike n’ofufe Chineke. I kwesịrị ijisi eziokwu ahụ ike, raparakwa Jehova n’ahụ́. (Diut. 10:20) Ọ bụ ihe otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Georgina mere. Mgbe Ndịàmà Jehova malitere ịmụrụ ya Baịbụl n’afọ 1970, di ya, bụ́ Kyriacos, were ezigbo iwe. Ọ gbalịrị ime ka nwunye ya kwụsị ịmụ Baịbụl. Ọ naghị ekwe ka Ndịàmà Jehova bịa n’ụlọ ha. Ọ na-atụfu akwụkwọ Ndịàmà Jehova ọ bụla nwunye ya ji.
Mgbe Georgina malitere ịga ọmụmụ ihe, iwe wekwuru Kyriacos. Otu ụbọchị, ọ gara n’Ụlọ Nzukọ Alaeze ka ọ gaa kpata ọgba aghara. Mgbe otu nwanna nwaanyị chọpụtara na Kyriacos na-asụ asụsụ Grik karịa Bekee, ọ kpọrọ otu nwanna nwoke onye Grik, bụ́ onye nọ n’ọgbakọ ọzọ, ka ọ bịa gwa ya okwu. Otú nwanna nwoke ahụ si jiri obiọma gwa Kyriacos okwu mere ka o gee ya ntị. O kwedịrị ka ọ mụọrọ ya Baịbụl ruo ọnwa ole na ole. Ma Kyriacos mechara kwụsị ịmụ Baịbụl.
Kyriacos ka nọkwa na-emegide nwunye ya bụ́ Georgina ruo afọ atọ ọzọ. O kwuru na ya ga-achụpụ nwunye ya ma ọ nwaa anwa kwe ka e mee ya baptizim. N’ụbọchị a ga-eme Georgina baptizim, o kpesiri ekpere ike, rịọ Jehova ka ọ ghara ikwe ka Kyriacos chụpụ ya. Mgbe ụmụnna ji ụgbọala bịa iburu ya gaa mgbakọ, Kyriacos gwara ha, sị: “Gawanụ. Anyị ga-eji ụgbọala anyị na-eso unu.” Ọ nọ mgbe a na-eme ihe omume nke ụtụtụ ma hụ ka e mere nwunye ya baptizim!
Georgina mechara hụ ka e mere di ya baptizim. N’oge ahụ, ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na iri afọ anọ agaala kemgbe Ndịàmà Jehova ziri Georgina ozi ọma
Ka oge na-aga, Kyriacos kwụsịtụrụ inye nwunye ya nsogbu, jirikwa nwayọọ nwayọọ na-agbanwe àgwà ya. Georgina mechara hụ ka e mere di ya baptizim. N’oge ahụ, ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na iri afọ anọ agaala kemgbe Ndịàmà Jehova ziri Georgina ozi ọma. Gịnị nyeere Kyriacos aka? O kwuru, sị: “Obi dị m ezigbo ụtọ na Georgina ekweghị ka ihe ọ bụla mee ka ọ kwụsị ife Jehova.” Georgina sịrị: “N’agbanyeghị na di m na-emegide m, ekpebiri m na m gaghị akwụsị ife Chineke m. N’oge ahụ niile, m nọ na-ekpegara Jehova ekpere, akwụsịghịkwa m inwe olileanya.”
IYIRI MMADỤ ỌHỤRỤ AHỤ BARA URU
Ihe ọzọ i kwesịrị ime iji nyere di gị ma ọ bụ nwunye gị aka ịmalite ife Jehova bụ ịmụta ịkpa àgwà Ndị Kraịst. Pita onyeozi dụrụ Ndị Kraịst bụ́ nwunye ọdụ, sị: “Doonụ onwe unu n’okpuru di unu, ka e wee rite ha n’uru n’ekwughị okwu ọ bụla site n’omume nwunye ha, ma ọ bụrụ na ụfọdụ n’ime ha adịghị erube isi n’okwu Chineke.” (1 Pita 3:1) Otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Christine mere ihe ahụ Pita kwuru, n’agbanyeghị na o were ọtụtụ afọ tupu omume ọma ya emee ka di ya bata n’ọgbakọ. Ọ karịala iri afọ abụọ Christine ghọrọ Onyeàmà Jehova. Ma, n’oge ahụ, di ya bụ́ John ekweghị na Chineke. Ọ chọghịkwa iso n’ihe ọ bụla gbasara okpukpe, ma ọ ghọtara na okpukpe nwunye ya bụ́ Christine malitere ikpe ọhụrụ dị ya ezigbo mkpa. John kwuru, sị: “Achọpụtara m na ọ na-eme ya obi ụtọ. Ọ mụtara ikpebisi ike ime ihe ọ chọrọ ime, bụrụkwa onye e kwesịrị ịtụkwasị obi. Àgwà ya nyeere m aka imeri ọtụtụ nsogbu bịaara m.”
O nweghị mgbe Christine gbalịrị ịmanye di ya ka ọ ghọọ Onyeàmà Jehova. Di ya kwuru, sị: “Site ná mmalite, Christine ghọtara na ọ ga-akacha mma ka ọ ghara ịna-ezi m ozi ọma. O nweere m ndidi ma hapụ m ka m jiri nwayọọ nwayọọ na-amụ ihe banyere Baịbụl otú m chọrọ.” Ọ na-abụ, Christine hụ isiokwu Ụlọ Nche ma ọ bụ Teta! nke kwuru ihe o chere ga-amasị di ya, dị ka sayensị na ihe ndị Chineke kere eke, ọ na-agwa ya, sị, “Ọ dị m ka isiokwu a ọ̀ ga-amasị gị.”
John mechara laa ezumike nká ma malite ịkọ obere ugbo. Ebe ọ bụ na o nwere efe iche echiche banyere ihe ndị gbasara ndụ, ọ malitere iche, sị: ‘Ndụ anyị dị ugbu a ọ̀ malitere na mberede, ka ò nwere ihe mere e ji kee ndị mmadụ?’ Otu ụbọchi, otu nwanna ya na John na-akparịta ụka gwara ya, sị, “Ka m mụwaranụ gị Baịbụl.” John kwuru, sị: “Ebe ọ bụ na amalitela m ikwere na Chineke, ekwetara m ka ọ mụwara m Baịbụl.”
Ọ bara ezigbo uru na Christine akwụsịghị inwe olileanya! E mere John baptizim mgbe afọ iri abụọ gacharala kemgbe nwunye ya kpewere ekpere ka ọ ghọọ Onyeàmà Jehova. Ha abụọ jizi ịnụ ọkụ n’obi na-efekọ Jehova ọnụ. John sịrị: “E nwere ihe abụọ mere ka m kpebie ịghọ Onyeàmà Jehova. Ọ bụ obiọma ụmụnna nwere na otú ha si hụ ibe ha n’anya. Ọ bụrụkwa na di gị ma ọ bụ nwunye gị bụ Onyeàmà Jehova, mara na ọ bụ ezigbo mmadụ e kwesịrị ịtụkwasị obi na onye na-echebara ndị ozọ echiche.” N’eziokwu, Christine mere ihe e kwuru na 1 Pita 3:1, o mekwara ka di ya chegharịa!
IHE ANYỊ KỤRỤ NWERE IKE IMECHA MỊA MKPỤRỤ
Gịnị ka ị ga-eme ma e nwee ihe mere ka ndị ị na-amụrụ Baịbụl kwụsị ịmụ ihe? Eze Sọlọmọn dere, sị: “Ghaa mkpụrụ gị n’ụtụtụ, ekwekwala ka aka gị zuo ike ruo n’anyasị; n’ihi na ị maghị ebe ọ ga-eme nke ọma, ma ọ̀ bụ n’ebe a ma ọ bụ n’ebe ahụ, ma ọ̀ bụ na ha abụọ ga-adịcha mma.” (Ekli. 11:6) Mgbe ụfọdụ, ọ na-ewe ọtụtụ afọ tupu ụfọdụ ekweta eziokwu a kụziiri ha. Ma, mmadụ nwere ike imecha ghọta na ịbịaru Chineke nso bara uru. (Jems 4:8) N’eziokwu, otu ụbọchị, i nwere ike ịnụ ihe ị na-atụghị anya ya nke ga-eme gị obi ụtọ.
Chegodị banyere Alice, bụ́ onye si India kwaga Ingland. Ọ malitere ịmụ Baịbụl n’afọ 1974. Ọ na-asụ asụsụ Hindi ma chọọ ịmụtakwu Bekee. Alice mụrụ ihe ruo afọ ole na ole, gaakwa ọmụmụ ihe ugboro ole na ole n’ọgbakọ ndị ji asụsụ Bekee amụ ihe. Ọ ma na ihe ọ na-amụta bụ eziokwu, ma ọ ghọtaghị na ọ dị ezigbo mkpa. Ihe ọzọ bụ na mkpa ya mgbe ahụ bụ ịchụ ego, ikpori ndụ na-atọkwa ya ezigbo ụtọ. Alice mechara kwụsị ịmụ Baịbụl.
Mgbe ihe dị ka afọ iri atọ gachara, Alice degaara Stella, bụ́ onye na-amụburu ya ihe, akwụkwọ ozi. Alice dere n’akwụkwọ ozi ahụ, sị: “Ama m na obi ga-adị gị ụtọ ịnụ na e mere onye ahụ ị malitere ịmụrụ Baịbụl n’afọ 1974 baptizim ná mgbakọ distrikti e mere n’oge na-adịbeghị anya. Ihe ị kụziiri m baara m ezigbo uru. Ị kụnyere eziokwu Baịbụl n’obi m. N’agbanyeghị na achọbeghị m inyefe Chineke onwe m mgbe ahụ, echefughị m eziokwu ahụ ị kụziiri m.”
Akwụkwọ ozi ahụ Alice degaara Stella kwuru, sị: “Ama m na obi ga-adị gị ụtọ ịnụ na e mere onye ahụ ị malitere ịmụrụ Baịbụl n’afọ 1974 baptizim ná mgbakọ distrikti e mere n’oge na-adịbeghị anya”
Gịnị mere ka Alice gbanwee? O kwuru na obi gbawara ya mgbe di ya nwụrụ n’afọ 1997. O kpegaara Chineke ekpere. Tupu nkeji iri agachaa, Ndịàmà Jehova abụọ na-asụ asụsụ Punjabi bịara n’ụlọ ya ma nye ya traktị isiokwu ya bụ Olileanya Dị Aṅaa Dịịri Ndị Anyị Hụrụ n’Anya Nwụrụ Anwụ? Alice ghọtara na ọ bụ otú Chineke si zaa ekpere ya. N’ihi ya, o kpebiri ịgawa ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova. Ma, olee ebe ọ ga-ahụ ha? Ọ chọtara otu akwụkwọ ochie o dere ebe Stella gwara ya ọgbakọ ndị Punjabi na-amụ ihe. Alice gara n’Ụlọ Nzukọ Alaeze, ụmụnna ndị na-eji asụsụ Punjabi amụ ihe nabatara ya nke ọma. Alice kwuru, sị: “Echefughị m ịhụnanya ha gosiri m echefu, o mekwara ka m nweta onwe m n’uju m nọ na-eru.”
Ọ malitere ịgachi ọmụmụ ihe anya, kwekwa ka e bido ịmụrụ ya ihe. Ọ mụtara ịsụ asụsụ Punjabi nke ọma, na-agụkwa ya. E mere ya baptizim n’afọ 2003. Ihe ikpeazụ o kwuru n’akwụkwọ ozi ahụ o degaara Stella bụ, “Ana m ekele gị nke ukwuu maka otú i si kụnye eziokwu Baịbụl n’obi m afọ iri abụọ na itoolu gara aga nakwa otú i si jiri omume gị kụziere m ihe m kwesịrị ime.”
“Ana m ekele gị nke ukwuu maka otú i si kụnye eziokwu Baịbụl n’obi m afọ iri abụọ na itoolu gara aga nakwa otú i si jiri omume gị kụziere m ihe m kwesịrị ime.”—Alice
Gịnị ka i nwere ike ịmụta n’ihe ndị a a kọrọ? Ọ bụrụ na mmadụ ji obi ya niile chọọ ịma Chineke ma dị umeala n’obi, Jehova ga-eme ka eziokwu Baịbụl gbaa mgbọrọgwụ n’obi ya. Ma ọtụtụ afọ nwere ike ịgafe karịa ka ị tụrụ anya ya. Cheta na Jizọs kwuru n’otu ihe atụ ya, sị: “Mkpụrụ ndị ahụ wee pulite ma too ogologo, otú o si mee, [ọgha mkpụrụ ahụ amaghị]. Ala ahụ ji nwayọọ nwayọọ mịa mkpụrụ n’onwe ya, akwụkwọ ya bu ụzọ pụta, e mesịa, oko ya pụtara, n’ikpeazụ, mkpụrụ kara aka si n’oko ya ahụ pụta.” (Mak 4:27, 28) Mkpụrụ na-eto nwayọọ nwayọọ “n’onwe ya.” Ihe ọ pụtara bụ na onye nkwusa anaghị ama otú eziokwu Baịbụl ọ kụrụ n’obi ndị mmadụ nwere ike isi gbanye mgbọrọgwụ. N’ihi ya, na-agha mkpụrụ n’ụba. I nwekwara ike ịghọrọ mkpụrụ n’ụba.
Echefula na ekpere dịkwa ezigbo mkpa. Georgina na Christine kpegaara Jehova ekpere ọtụtụ ugboro. Ọ bụrụ na ị ‘nọgidesie ike n’ekpere’ ma ghara ịkwụsị inwe olileanya, “mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị,” i nwere ike ịhụkwa “achịcha” i zipụrụ n’elu mmiri.—Rom 12:12; Ekli. 11:1.